ခင်မင်းဇော်: September 2011
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၄ နှစ်ပြည့် လှုပ်ရှားမှုအပေါ် ဦးဝင်းတင် သဘောထား
ကျနော့်သဘောထားကျနော် ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးနေတာနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ဆိမ်ဆိမ် နေရမယ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူးလို့ကျနော်ယူဆတယ်။ ဘာမှ ငြိမ်စရာမရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ဒီလိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စတွေက အစိုးရက လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကို မလုပ်လို့မငြိမ်မဆိမ် ဖြစ်နေတာကိုး။ လွှတ်ရမယ့်အချိန်မှာ မလွှတ်ဘူး။ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်မပေးဘူး ဆိုတဲ့အခါကျတော့ မငြိမ်မဆိမ်ဖြစ်နေမှာ ပေါ့။ တောင်းဆိုကြမှာပေါ့။ မိသားစုတွေ၊ လိုလားတဲ့ လူတွေကတော့ ပြောကြဆိုကြမှာပေါ့ဗျာ. ဒါပဲပေါ့။ အဲဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ အတွက်ဆိုပြီးတော့ မလိုလားဘူးဆိုတာတော့ ..အဲဒါတော့ မမှန်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်။
(၂၇၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၁ ည ၇း၃၀ အာအက်ဖ်အေမှ မနေ့က လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်နေကြတဲ့အပေါ် ဦးဝင်းတင်ရဲ့ သဘောထား မေးမြန်းမှု အသံလွှင့်ချက်မှ)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:47 PM5comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:42 PM 14 comments:
ဒီဇိုင်နာ သီဟမောင်မောင် ရဲ့ ပုံကို ယူသုံးပါသည်၊
မြစ်တစင်းက သူ့ရဲ့ မှီခိုရာ ပင်လယ်ကြီးဆီကို စီးဆင်းအလာ ခိုဝင်ခါနီးလေ တလျှောက်လုံး သယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ သဘာဝတရားရဲ့ အနှစ်သာရတွေကို မြေကမ္ဘာအတွက် သွန်ချပေးခဲ့လေပေါ့။ အဲဒီလိုနဲ့ သူက သူ့ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းခွင့်ပြုတဲ့ နိုင်ငံတခုအတွက် သူ့ကို အားကိုးချစ်ခင်ကြတဲ့ လူသားမျိုးနွယ်တွေအတွက် ပုံဖေါ်ပေးထားတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဆိုတဲ့ မြေဆီမြေနှစ်တွေနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးထွန်းကားရာ ဒေသကို ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဲဒီအဆီအနှစ်များ သွန်အန်ချပေးခဲ့ရာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဧရာဝတီတိုင်းဟာ ကျမရဲ့ ချက်မြှပ်ဇာတိလေးပါ။
မြစ်ကမ်းနဘေးနားမှာ မွေးခဲ့ပေမဲ့ ကျမသိခဲ့ မြစ်ကလေးနာမည်က င၀န်မြစ်တဲ့။ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးက ပင်လယ်ကြီးဆီခိုဝင်ခါနီး ကိုယ်ပွားချန်ထားခဲ့တဲ့ မြစ်မွှာလေးထဲက နာမည်အကြီးဆုံး မြစ်ပေါ့။ အဲဒီ မြစ်ကမ်းပါးမှာ ငယ်ဘ၀တွေ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာမို့ ပင်လယ်ကြီးနဲ့မြစ်တွေရဲ့ ချစ်တင်းနှောရာ ဒီရေတက်ချိန်တွေမှာ ရေငန်တွေဝင်လာတတ်တာ၊ အဲဒီလို ရေငန်ဝင်ချိန်မှာ စားရတဲ့ ပင်လယ်ငါးဆိုတာ လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို အထောက်အကူအပြုတာ…. မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စပါးကျီဆိုပြီး တင်စားပြောခဲ့လို ဒီဒေသထွက် ပေါ်ဆန်းမွှေးဆိုတာ ချက်နေရင်းရတဲ့ မွှေးရနံ့မှာတင် ဘယ်ဆန်နဲ့မှ မတူနိုင်တာ စသော အစရှိသော ထူးခြားချက်တွေ ပြန်ပြောရင် မြစ်ကြီးဧရာဝတီရဲ့ ကျေးဇူးတွေကို ဘယ်လိုမေ့လို့ ရမှာလဲ ၊ ဘယ်မှာ ကင်းလွတ်နိုင်ပါ့မလဲ။
ခုတော့ မြစ်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း မြစ်ဆုံမှာ ဆည်ကြီးတခုတည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုတော့ သဘာဝ ပညာရှင်တွေက ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ အဆိုးအကောင်းအကျိုးအပြစ်တွေ စာတမ်းပြုစုတင်ပြကြသတဲ့၊ အဲဒီထဲမှာ ပင်လယ်ထဲကို စီးဝင်ခိုတွယ်မဲ့ ဧရာဝတီက ဆည်တည်ဆောက်လိုက်လို့ ရေစီးနှေးသွားရင် ပင်လယ်ကြီးထဲက ရေငန်တွေက လိုက်ပါ ၀င်ရောက်လာတော့မှာတဲ့။ ဒါဆိုရင် ရေစီးနှေးသွားမယ့် မြစ်ကြီးဆီက သယ်ဆောင်လာ မယ့် မြေဆီမြေနှစ်တွေ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ထိမရောက်လာနိုင်တော့သလို ပင်လယ်ရေငန်တွေ မထွက်တော့ပဲ ခိုတွယ်နေတော့မယ့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က စပါးကျီတွေပျက်မယ်၊ ရေချိုငါး၊ ရေငန်းငါးတွေရဲ့ ခိုလှုံနေထိုင်ရာတွေ ပျက်ယွင်းတော့မယ် ၊မြစ်ဖျားက အကျိုးဆက်ကို မြစ်အောက်ပိုင်းက ခံစားရမှာတွေကလဲ မြစ်ဆုံဒေသနဲ့အကျိုးတူဆက်နွယ်နေတာပါပဲ။ ပင်လယ်ကြီးကရော ဒီတိုင်းခွင့်လွှတ်နေမယ်လို့ ထင်ပါသလား၊ မြစ်ဧရာကို ဖျက်ဆီးတဲ့အတွက် သူကလဲ ကလဲ့စားချေဦးမှာပါ။ ဒီတော့ကျမတို့ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ။
မြစ်ဆုံမှာ ရေကာတာတည်ဆောက်မယ့် ဒီ စီမံကိန်းကို၊
မြစ်ဧရာရဲ့ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းမှုကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမယ့် ဒီစီမံကိန်းကို၊
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တည်ရှိနေမှုကို ချေဖျက်မယ့် ဒီစီမံကိန်းကို၊
မြန်မာလူမျိုးရဲ့ ရပ်တည်မှုကို ပျက်သုန်းသွားစေမယ့် ဒီစီမံကိန်းကို၊
အားလုံးသော မြန်မာပြည်သူပြည်သားများနဲ့ အတူ ကန့်ကွက်ပါကြောင်း သိစေအပ်ပါသည်။
ဆက်လက်စီးဆင်းနိုင်ပါစေ မိခင် ဧရာဝတီ၊
Posted by ခင်မင်းဇော် at 9:04 PM7comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 12:06 AM4comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 9:45 PM 8 comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:47 PM3comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:54 PM5comments:
ဒီနေ့ ညဘက်သတင်းတွေ လိုက်ဖတ်၊ ဘလော့တွေ လိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့ ဗွီဒီယိုကလစ်လေးတခုကို ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလော့ကနေ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ခေါင်းစဉ်လေးက ဘာမှသိပ်မကွာခြားပါဘူးတဲ့။ မြင်ရတဲ့ ပုံလေးကလဲ အဖြူအမည်းနဲ့ ကလေးမလေး တယောက် ၊ ကြာချိန်ကလဲ ၃မိနစ်နဲ့ ၄၅ စက္ကန့်ပဲ ဆိုတော့ ကလစ်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ရင်ထဲမှာ ဆို့နစ်သွားရတယ်။ ကြည့်ဖို့ အချိန်လေး ခဏပေးပြီး အောက်က စာတမ်းပေါ် ကလစ်ကာ ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဘာမှ သိပ်မကွာခြားပါဘူး။
မျက်နှာစာအုပ်မှာလဲ လင့်လေး ယူမျှထားတယ်။ ဒီဘလော့လေးမှာလဲ ယူတင်ထားလိုက်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းကလူတွေ ကြည့်လို့ရမရ တော့ သိချင်ပါတယ်။ မရရင် တခုခု ထပ်လုပ်ပေးချင်တယ်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:13 PM No comments: